"Bixilleen Xannee Dhoogguf Malee Quufaaf Hin Geessu" -
Garaa Ofiitiif jecha garaa waliin dhalatan nyaachuun Diinummaadha. Waraabessi yoomiyyuu Waraabessuma. Cittayaan Ochumaa ofii guuttachuun alatti dhima biraa yaaduuf hin qabaatu. Qabaachuus hin danda’u.
Bineensi Waraabessa duwwaa osoo hin taane bineensi namaas kan akka Waraabessaa jiraachuun isaa waan nama wal gaafachiisu miti.
“Kiyyaa nama Ormaa fi tiyyaa lafa Ormaa itti hin galanii irraa nyaatanii biraa galani” akkuma jedhamu Wayyaaneen dantaan ishiin ummata Oromoo irraa qabdu Qabeenya Oromoo lafa Oromoo Oromiyaa irraa saamtee dhameefachuu fi nama Oromoo abbaa qe’ee fi qabeenyaa ashkara/ ergamtuu bara baraa gochuun akka Harreetti dugda malaaxessaa ergachuudha.
Dantaan OPDOn ummata Oromoo ajjeefamu,hidhamu, qe’ee fi qabeenya isaa irraa buqqa’u cal jettee ilaaluun argattu maali? “ofii bahan Ormaaf nahan” mammaka jedhuun addummaa hin qabu.
Ruutuun garaa ofiitii quufte inni biraa waan beelawu hin seetu. Kanaaf dantaan OPDOn ummanni Oromoo harqoota gabrummaatiin dararamuu irraa argattu ergama diinaa galmaan gahuun jireenya lubbuu ishii dheereffachuu duwwaa dha.
Ilmoon namaa du’a uumaa , du’a seenaa qabdu tokkuma duuti. OPDOn ammoo du’a seenaa hin qabne osoo jiraniiti kan dhaabbitti du’an. Saba ofii diinaan fuulletti akka bineensaatti ajjeefamu osoo arganii cal jedhanii ilaaluu fi diina Obbolaa isaa, garaa isaa, haadhoo isaa fi madhaa maatii isaa ajjeesu waliin nyaatanii dhuguun kolfanii qisaa’aa waliin jiraachuun gochaa dhala namaa osoo hin taane gochaa WARAABESSAA, Bineensaa garaa ofii qofaaf jiraatuudha.
Kanaaf Ummanni Oromoo “Dhamaatuu dhama raaftu ” OPDO waliin raatahuun haa gahu.
“Utubaan hanga dhiibanii fi hanga dhiisan qaba” maqaa ummata gageesina nutu bulcha jedhuun ummata afotti bahanii yeroo lammiin akka mukaatti Oromiyaa guutuu keessatti lafa irraa cicciramaa duguugamaa jirutti IBSA baasna jechuun waraanni keenya daangaa tiksuu qaba, ummanni keenya ammoo miira keessa seenee Wareegama hin feesifne baasuu hin qabu, kanaaf nama yakka raawwate seeratti dhiheessinaa , gaaffii keessan karaa nagahaatiin gaafadha jedhanii ummata jumlaan qe’ee isaatti dhumaa jiru taagabbeessuuf yaaluun Bineesaa ta’anii Waraabessa waliin nama nyaachuudha.
OPDO jechuun eenyu? Garaagarummaan isaan TPLFn waliin qaban maali? Bineensi Bineensuma. Yoomiyyuu Bineensuma; Waraabeyyii sanyii ofiitiif hin tililee/ hin rifanne Diinota Innikkaati!
“Muka muka irraa muran malee nama nama irraa hin muran”
Kan kana godhu yoo jiraate diina amala namummaatiin ala bahe duwwaadha. OPDOn hanga Wayyaaneen bixilamtee waadaa ittiin ijaaramte du’aan xumurattutti Ummata Oromootiif hojjattee saba gabroome gabrummaa jalaa baastiin Gowwummaa, Maraatummaa/ of wallaaluudha. Oromoo ta’ee kan jechaa fi gochaa OPDO dhugeeffatu hin jiraatu; jiraatus nama ta’ee hin jiraatu.
Waan ta’eef Ummanni Oromoo keessaa fi alaan jirtan afan fajjii OPDOf osoo gurra hin kennin ajjeechaa jumlaa lammilee keenya irratti ta’aa jiruuf yeroon waan dandeenyuun birmannu kan yeeoo kamiiyyuu caalaa amma. Kanaaf OPDOn ummata Oromoo afotti argamuun ni qabnaa maqaati malee, murna garaa kutatee lammii isaatiif birmatuu miti anis kanaafi kan “Bixxilleen Xannee dhooguuf malee Quufaaf waa hin gootu ” jedheef.
Walumaa galattii QBO taasifamaa jiru itti galli isaa Bilisummaa Sabaa fi Walabummaa Biyyaa akka ta’uuf fallii fi malli jiru qabsoo hidhannoo duwwaa finiinsuudha. Diinni Qawween dhufe Qawwee malee hin buqqa’u . Kanaaf yoomiyyuu qabsoo keenyaaf furmaanni maayii QAWWEE qofaan dhaamsa kooti.
1 thought on ““Bixilleen Xannee Dhoogguf Malee Quufaaf Hin Geessu””
“Dhirsi harree waraabessa irraa nama hin buusu!” jedhu mitii ree?
“Kan dhiqantu na dhiqaa?” jette xuwween niitii boosettiidhaan. Kan ofiif bilisa hin bahintu haqa Oromoof dhaabanne jechaa turan, hardha ammoo qabsoo keessan nutti dhiisaa, nutu bilisa isin baasaa, jechaa jiru. Kanneen ummata isaaniitiif quuqaman OPDO keessa hin jiran jechuu osoo hin taane, hardha iyyuu akka dhaabaatti maxxannummaa irraa osoo of hin baasin, Oromoof dubbachuu hin dandeessan jechuu dha. Qaamni isaanii gar tokko amma iyyuu somba TPLF’n afuura baafata, sammuu Tigreetiin yaada, Onnee Tigreetu keessaa dhikkifata. Yoo akka dhaaba Oromootti seenaan akka isaan yaadatu fedhan yeroo isaan bilisa of baasan amma dha.
Otherwise, they will remain as some negligible foot note of history. The march of the Oromo towards full emancipation is unstoppable.